<<first <prev 1234(5)67 8910 next> last>>
Hot News 06 Jan 2012
Posted By - Ko Ko - January 7, 2012
Ex-boyfriend leaks video of anonymous celebrity
ချစ်သူက ချော့ပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်မယ် ဆိုရင်ငြင်းပါ
ချစ်တုံး ခင်တုံးတော့ ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြ၊ ဗီဒီယို တွေရိုက် ကြပေါ့။ ကွဲသွား ကြရင်တော့ ဒီဟာတွေ က ကိုယ့်ကို ဒုက္ခ ပေးမဲ့ ဟာတွေပဲ လို့ မှတ်ကြပါ။
ကိုးရီးယား လူသိ များတဲ့ မင်းသမီး တစ်ဦးဟာ၊ ချစ်သူနဲ့ အမြင်မတော် နေထိုင် ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ ကို ဗီဒီယို တွေ ဓါတ်ပုံ တွေ ရိုက်ထား ခဲ့မိ ပါတယ်။
သူတို့ ကွဲသွား ပြီးနောက် ၄င်း ချစ်သူက မမြင်မတော် တဲ့ ဟာတွေကို စိတ်ဆိုးပြီး၊ internet ပေါ်တင် လိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီမင်းသမီး အရှက် လှလှ ကွဲနေ ပါပြီး။
Source : Ex-boyfriend leaks video of anonymous celebrity
Gong Yoo to tour three Japanese cities
မင်းသား Gong Yoo ဂျပန်တွင် Tour ဆင်းခြင်
မင်းသား Gong Yoo ဟာ၎င်းရဲ့ မင်းသားသက် ၁၀ နှစ်မြောက် အထိန်းအမှတ် အဖြစ် ဂျပန် မြို့ကြီး သုံးမြို့မှာ fan meet ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
Dec.7မှာ Fukuoka မြို့၊ Dec.9မှာ Aichi မြို့နဲ့ Dec. 12 မှာ Tokyo မြို့တို့တွင် fan meet များကျင်းပ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Gong Yoo to tour three Japanese cities
Park Bo-yeong's apple hair and baby face
Park Bo-yeong (21) ဟာ Twitter မှာ ၄င်းရဲ့ ဓါတ်ပုံကို post လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ "ဒီနေ့ သိတ်အေး တာပဲ၊ အလုပ် တွေလည်း အားလုံး ပြီးသွားပြီး၊ အိမ်မှာ နေရတာ အကောင်းဆုံး ပဲ" လို့ရေး ထားပါတယ်။ သူ့ပုံ လေးကတော့ ၂၀ ကျော်လို့ မထင်ရပဲ၊ ၁၃ နှစ်သမီး လေးလား မှတ်ရ ပါတယ်။
Source : Park Bo-yeong's apple hair and baby face
Kwon Min-joong booked without
detention for drunk driving
မင်းသမီး Kwon Min-joong ဟာ Dec.7ကမူးပြီး ကားမောင်လို့ ရဲက လိုင်းစင် သိမ်းပြီး၊ အရေးယူ ခဲ့ရတယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Kwon Min-joong booked without detention for drunk driving
မင်းသား Rain ဟာ 2011 Oct ကထဲက စစ်ထဲ ရောက်နေ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်ငြိမ် မနေပါဘူး၊ အပြင်မှာ ရှိတဲ့သူ့ ကိုယ်စာလှယ် နဲ့ လူတစ်ယောက် ကိုလှမ်းပြီး တရားစွဲနေ ပါတယ်။
ကိုးရီးယား Cheongdam-dong မှာရှိတဲ့ Rain ပိုင်တဲ့ အဆောက် အဦး တစ်ခုကို ဟောင်ကောင် က Christine Park ဆိုသူ designer တစ်ဦးက သူ့ရဲ့ အနုပညာ ပစ္စည်း များကို ခင်းကျင်း ပြသဖို့ ငှားထား ပါတယ်။
ဒီအဆောက် အဦးရဲ့ အမိုးက ရေတွေစိမ့် ဝင်ပြီး အထဲက အနုပညာ ပစ္စည်း များ ပျက်စီးမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် Christine Park က Rain ကိုတရားစွဲ ခဲ့ပါတယ်။ အခန်းငှားခ လည်းဒီနေ့ အထိ မပေး ခဲ့ဘူး လို့သိရ ပါတယ်။
Rain ဘက်က၊ ရေဝင် နိုင်တာကို ကြိုတင် အကြောင်း ကြားစာ ပို့ခဲ့ ပါတယ်လို့၊ အကြောင်းပြပြီး အခန်း ငှားခများ ပြန်လည် ရလိုကြောင်း တန်ပြန် တရား စွဲဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။.
Source : Rain entangled in lawsuit, again
အဆိုတော် Se7en တစ်ကျော့ပြန်လာခြင်း
အဆိုတော် Se7en ဟာ January 18 က mini-album အသစ် တစ်ခု ထုတ်ဝေ ခဲ့ပါတယ်။ အခု အထိတော့ ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံ ထဲမှာ ဖြန့်ချီ ပါတယ်။ ဂျပန်က ဖောက်သည် တွေကလည်း သူတို့ဆီ မှာပါ တစ်ပြိုင်ထဲ လောက် ရောင်းချ ပေးဖို့ တောင်းဆို ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Se7en To Make Comeback January 2012
Kim Ah-joong comes back in
6 years with romantic comedy
မင်းသမီး Kim Ah-joong ရုပ်ရှင် ရိုက်ရန် စဉ်းစားနေခြင်း
မင်းသမီး Kim Ah-joong လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ် ကျော်က 200 Pounds Beauty ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ နာမည်ကြီး လာသူဖြစ် ပါတယ်။ အခု သူ့ရဲ့ ဒုတိယ movie ဖြစ်နိုင်တဲ့ My P.S Partner အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကို လက္ခံ ရိုက်ကူး ပေးရန် စဉ်းစား နေတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Kim Ah-joong comes back in6years with romantic comedy
Lee Joon-ki is sergeant to be discharged in February
မင်းသား Lee Joon-ki တပ်ကြပ်ကြီး
နိုင်ငံသား တာဝန်အရ စစ်မှုထမ်း နေတဲ့ မင်းသား Lee Joon-ki ဟာ Dec 1 က တပ်ကြပ်ကြီး အဆင့်သို့ ရာထူးတိုးသွားတယ် လို့သိရ ပါတယ်။ ၄င်းဟာ မကြာမှီ တာဝန် ပြီးဆုံးလို့ အရပ်သား ပြန်ဖြစ် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ထွက် လာချင်း ဂျပန်မှာ fan meet လုပ်ရန်စီစဉ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Joon-ki is sergeant to be discharged in February
Kim Rae-won "I hadagirlfriend of6years"
SBS ရုပ်သံရဲ့ TV News At Night အင်တာဗျူး မှာ မင်းသား Kim Rae-won က သူ့မှာ ၆ နှစ်ကြာ ချစ်လာ ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူ ရည်းစား ရှိကြောင်း ထုတ်ဖေါ် ပြောကြား သွားပါတယ်။
Source : Kim Rae-won "I hadagirlfriend of6years"
Kim Jae-won သက်သာလာပြီး
MBC ရုပ်သံရဲ့ Me Too, Flower အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်နေစဉ် Kim Jae-won ဟာ ရိုက်ကွင်းမှာ ပုခုံး အဆစ် ပြုတ်ထွက် သွားလို့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ နှုတ်ထွက် ခဲ့ရ ပါတယ်။
ထိုစဉ်ထဲက Seoul မြို့ နာမည်ကြီး ဆေးရုံတစ်ရုံ မှာတက်ရောက် ကုသ နေခဲ့ရ ပါတယ်။ အခု မင်းသားဟာ လက်ကို တစ်ဝက် လောက်မြှောက်လို့ ရနေပြီးလို့ သိရ ပါတယ်။ 2011 နှစ်ဆန်းပိုင်း မှာဆေးရုံက ဆင်းနိုင် တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်
Source : Kim Jae-won recovers quickly
Son Ye-jin, "I want to date too,
I enjoy watching - The Perfect Pair"
အဖေါ်မဲ့နေတဲ့မင်းသမီချော Son Ye-jin
ကျွန်မမှာ ရည်းစားလေး တစ်ယောက် တော့ရှိချင် ပါတယ် လို့ မင်းသမီး Son Ye-jin [၂၉ နှစ်] က အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ပြောသွားပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုံး ကတော့ အနုပညာ အလုပ်ကိုပဲ ဖိလုပ်နေ ရလို့ သင့်တော်မဲ့ သူတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ဖို့ အခွင်အရေး တွေဆုံးရှုံး ခဲ့ရ ပါတယ်။ အခုတော့ အင်မတန်မှ အထီးကျန် နိုင်လှ ပါတယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Son Ye-jin ဟာ မင်းသား Lee Min-ki နဲ့တွဲဖက်ပြီး Chilling Romance အမည် ရှိတဲ့ movie တစ်ကားကို ရိုက်ကူး ထားပါတယ်။
မင်းသား Lee Min-ki က မင်းသမီးကို အလွန်လှပသူ ဖြစ်တယ်လို့ ချီကျူလို့ မဆုံးအောင် ရှိပါတယ်။ "မင်းသမီး Son Ye-jin ရဲ့တစ်ကိုယ် လုံးမှာ မလှတဲ့ နေရာဆိုလို့ တစ်နေရာမှ ရှာမတွေ့ ပါဘူးလို့" မင်းသားက ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Son Ye-jin, "I want to date too, I enjoy watching - The Perfect Pair"
Lee Hyo-lee dating Lee Sang-soon
အဆိုတော် Lee Hyo-lee ရည်းစားရပြီး
အဆိုတော် Lee Hyo-lee ဟာ Lee Sang-soon အမည်ရှိ guitarist နဲ့ date လုပ်နေကြတာ မှန်ကန် ကြောင်း Lee Hyo-lee ရဲ့ management agency မှ အတည်ပြု ပြောကြား သွားပါတယ်။ Lee Sang-soon ဟာ Roller Coaster တီးဝိုင်း အဖွဲ့ရဲ့ guitarist ဖြစ်ပါတယ်။
Lee Hyo-lee Falls for Fellow Animal Lover
ခလေးမင်းသမီးလေး Kim Sae-ron
ခလေး သရုပ်ဆောင် မင်းသပီးလေး Kim Sae-ron ဟာ မင်းသား Won Bin နဲ့တွဲပြီး The Man From Nowhere ရုပ်ရှင် မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ The Man From Nowhere ဟာ အတော် နာမည် ကြီးခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ စံချိန်တင် ခဲ့ပါတယ်။
Channel A အတွက် ရိုက်ကူမဲ့ Heaven's Garden အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မိတ်ဆက်ပွဲ မှာ Kim Sae-ron ကိုတွေ့ခဲ့ ကြရပါတယ်။ မင်းသမီးလေ ဟာ The Man From Nowhere မှာထက် 20 cm ပိုပြီး အရပ်ရှည် လာတယ်လို့ သူမရဲ့ agency က ပြောပါတယ်။
Source : Kim Sae-ron is growing up so fast
Kim Hye-soo friendly toward ex-lover
မင်းသမီး Kim Hye-soo ဟာ မကြာမှီက ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ 32nd Cheongryong Movie Awards မှာ အစီစဉ် ကြေငြာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ မင်းသား Yoo Hae-jin ဟာသူ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင် အတွက် ဆုတက် ယူပါတယ်။
မင်းသမီး Kim Hye-soo နဲ့ မင်းသား Yoo Hae-jin တို့ဟာ မကြာခင်က လမ်းခွဲ ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူ ဟောင်းများ ဖြစ်ကြ လေတော့၊ ဘယ်လို ဖြစ်ကြ မလဲ ဆိုပြီး ပရိသတ် က စောင့်ကြည့် နေခဲ့ကြ ပါတယ်။
Kim Hye-soo က ဆုတက် ယူတဲ့ Yoo Hae-jin ကို လက်ခုပ် တီးပြီး အားပေး ခဲ့တဲ့ အပြင်၊ နောက်ပိုင်းမှာ စင်အောက် ဆင်းပြီး Yoo Hae-jin ကို ပွေ့ဖက် လို့ပင် ချီးကျူး ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Rain, assistant instructor
of the recruit training center
စစ်သားကြီး Rain လက်ထောက်နည်းပြဖြစ်ပြီး
မင်းသား Rain အား စစ်သား လေ့ကျင့်ရေး တပ်တွင် မကြာမှီက လက်ထောက် နည်းပြ အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်သည် ဟုသိရ ပါသည်။
Rain ၏ စစ်မှုထမ်း တာဝန်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် လတွင်မှ ပြီးဆုံးမည် ဟု ဆိုပါသည်။
Rain, military life is likeawar movie
Rain, assistant instructor of the recruit training center
Han Ga-in chosen for main role in
MBS "The Sun and The Moon"
မင်းသမီး Han Ga-in ၏ပထမဆုံး
မင်းသမီး Han Ga-in ဟာ The Sun and The Moon (MBS) အမည်ရှိ ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့မည် ဟုသိရ ပါသည်။
မင်းသမီး Han Ga-in ရဲ့ သရုပ်ဆောင် သက်တမ်းမှာ ပထမဆုံး ပါဝင်မဲ့ ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ လည်းဖြစ် ပါတယ်။
လောလောဆယ် မင်းသမီးဟာ Architectural Theory အမည်ရှိ တဲ့ရုပ်ရှင် ကားကို ရိုက်ကူး နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး နောက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်က ရိုက်ကူး ခဲ့ပါတယ်။
Source : Han Ga-in chosen for main role in MBS "The Sun and The Moon"
ဇာတ်လမ်း အရ Seoul မြို့မှာ ဆိုးဝါးတဲ့ ရာဇဝတ် ကောင် (serial rapist) တစ်ဦး ပေါ်ပေါက် နေပါတယ်။ ဒီ ရာဇဝတ် ကောင် ဟာ မိန်းခလေး များကို ဆက်တိုက် မတရား ပြုကျင့်ပြီး သတ်ပစ် နေပါတယ်။
မိန်းခလေး တစ်ဦး (မင်းသမီး Kim Ha-neul) ဟာ တစ်ရက်မှာ လူသတ်ကောင် ရဲ့ကားထဲ ရောက်ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ကားရဲ့အနံ့၊ ကားထိုင်ခုံ ရဲ့အထိအတွေ့ နဲ့ လူသတ်ကောင် ရဲ့ အသံ တို့ကို ကောင်းစွာ မှတ်မိ ပါတယ်။ သူမဟာ ကံကောင်း ထောက်မပြီး လွတ်မြောက် ခဲ့ပါတယ်။
ဲပြသနာ က ဒီမိန်းခလေး ဟာ မျက်မမြင် ဒုက္ခိတ ဖြစ်နေခြင်း ပါပဲ။ လျှို့ဝှက် သဲဖို ရုပ်ရှင်ပါ၊ ၂၀၁၁ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကား ဖြစ်နှိုင်တယ် လို့ဝေဖန် သူက အပြတ် ညွှန်းထား ပါတယ်။
Source : The Blind Witness
Hyeon Bin appears in the news
စစ်ထဲကမင်းသား Hyeon Bin ရဲ့သတင်း
ရုပ်မြင် သံကြား ထဲမှာ ကိုးရီးယား သမတ Lee Myung-bak ဟာ တပ်ဖွဲ့ တစ်ခုကို စစ်ဆေးစဉ် မိန့်ခွန်း ပြောကြား နေတဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ် ပါလာ ပါတယ်။
ထူးခြားချက်က မိန့်ခွန်း နားထောင် နေတဲ့ စစ်သား တွေထဲမှာ မင်းသား Hyeon Bin ပုံ သတင်း ပါလာခြင်း ပါပဲ။
မင်းသားရဲ့ ပရိသတ် ဟာ မင်းသား ပုံပေါ် လာတော့ သဲသဲလှုပ် ရင်ခိုက်သွား ကြပါတယ်။ သမတ ကြီး Lee Myung-bak ကိုတော့ မေ့သွား ကြပုံ ပါပဲ။
Source : Hyeon Bin appears in the news
Han Ye-seul ရဲ့ကပ်စီနှဲများရုပ်ရှင်
မင်းသမီး Han Ye-seul ဟာ "ကော်တရာ ကပ်စီးနှဲများ" (Penny Pinchers) လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကား လက္ခံ ရိုက်ကူး နေပါတယ်။
မင်းသားက Song Joong-ki ဖြစ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ပါတယ်။ မင်းသမီး ကတော "ကော်တရာ ကပ်စီးနှဲ" အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ပါတယ်။
Source : Han Ye-seul "It hurts to judgeamovie by hits"
Yoo Jin,apretty bride in Pyebaek ceremony
လက်သစ်မင်းသမီး Yoo Jin
မင်းသမီး Yoo Jin နဲ့ မင်းသား Ki Tae-yeong တို့ဟာ များမကြာ မှီက လက်ထပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ မိဘ ကန်တော့တဲ့ အခမ်းအနား မှာ မင်းသမီး Yoo Jin ရဲ့ ချစ်စဖွယ် ရိုးရာ ဝတ်စုံနဲ့ ပုံ blog တစ်ခုတဲ မှာပါလာ ပါတယ်။
Source : Yoo Jin,apretty bride in Pyebaek ceremony
Hwang Soo-jeong back in spy role
မင်းသမီး Hwang Soo-jeong ပြန်လာပြီး
မင်းသမီး Hwang Soo-jeong (39) ဟာ For the Sake of Son လို့ အမည် ပေးထားတဲ့၊ အပိုင်း ၄ ပိုင်း ပါတဲ့ စပိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ပါဝင် ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးဟာ 2007 က Salt Doll လို့အသည် ရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာနောက်ဆုံး ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
2001 မှာ မင်းသမီးဟာ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှုနဲ့ ထောင် တနှစ်ခွဲ ကျသွားပြီး နောက် နာမည် ကျသွား ခဲ့ပါတယ်။
Source : Hwang Soo-jeong back in spy role
Jang Geun-seok "Can't compare with Bae Yong-joon"
Bae Yong-joon ကိုမပြိုင်ဝန့်ပါ
ကျွန်တော် မင်းသားကြီး Bae Yong-joon ရဲ့ပြိုင်ဖက် မဟုတ်ပါ။ Bae Yong-joon ဟာ သဘာရင့် ရန္တဝင်မင်းသားကြီး တစ်လက် ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်က ခုမှ ပေါ်လာတဲ့ ပေါက်စ လေး ပါလို့ မင်းသား Jang Geun-seok (၂၄) က ပြောသွားပါတယ်။
မင်းသား Jang Geun-seok ဟာ ဂျပန်မှာ အလွန် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂျပန် မဂ္ဂဇင်း တစ်ချို့က Jang Geun-seok ဟာ မင်းသား Bae Yong-joon ကို မကြာမှီ ကျော်တက်သွားတော့ မယ်လို့ သတင်းတွေ ရေးနေကြ ပါတယ်။
Source : Jang Geun-seok "Can't compare with Bae Yong-joon"
Ojak Brothers - catches 30% of viewers
Rating 30% အထက်မှာရှိနေတဲ့
Ojak Brothers ဇာတ်လမ်းတွဲ
Ojak Brothers (KBS) ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ 30.2% နဲ့တိုင်ထိပ် မှာရှိ နေဆဲပါ၊။ အခု ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ episode 13 ရောက်နေ ပါပြီး။ သူ့နောက်က MBC ရဲ့ A Thousand Kisses က 11.8% နဲ့ SBS ရဲ့ When Tomorrow Comes က 9.1% အသီးသီး နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း က လိုက်နေ ပါတယ်။
Source : Ojak Brothers - catches 30% of viewers
မင်းသမီး Kim Tae-hee ရဲ့ရှားပါးဓါတ်ပုံများ
မင်းသမီး Kim Tae-hee ရဲ့ အရင်က မတွေ့ဘူး သေးတဲ့ ဓါတ်ပုံများ internet ထဲမှာ ပေါ်ထွက် နေပါတယ်။ ရေချိုးခန်း ထဲမှာ ရေချိုးနေပုံ၊ ကိုးရိုးကားယား ထိုင်ပြီး မှန်ကြည့် နေတဲ့ ပုံတွေ ကို အရင်က မမြင်ဘူး ကြပါ။
အခု လောလောဆယ် Kim Tae-hee ဟာ ဂျပန်မှာ 99 Days With the Star အမည် ရှိတဲ့ ဂျပန် TV ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုရိုက် ကူးနေ ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee's 'rare' photo collection
Soo-ae's shocking past 13 years ago
လွန်လဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်က မင်းသမီး Soo-ae ရဲ့ပုံဟာ တကယ့်ကို ဘုတ်ပြဲကြီး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ မိန်းခလေး များဟာ မိမိကိုယ် မိမိ ထိန်းသိမ်း နှိုင်ရင် လှလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ သက်သေ ပါပဲ။
လောလောဆယ် Soo-ae ဟာ A Thousand Days' Promise (SBS) အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ Alzheimer ရောဂါသည် သရုပ်ဆောင် ပြီး ရိုက်ကူး နေပါတယ်။
Source : Soo-ae's shocking past 13 years ago
Lee Si-yeong in drama again,
this timeabodyguard
Lee Si-yeong နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွဲ
F4 မင်းသမီး Lee Si-yeong ဟာ Wild Romance (KBS) အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်တွဲ ထပ်ရိုက် နေပါတယ်။ မကြာသေး ခင်ကမှ Poseidon (2TV) ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ခဲ့ ပါသေးတယ်။
Poseidon မှာ ကမ်းခြေစောင့် ရဲအဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး၊ အခု ရိုက် နေတဲ့ Wild Romance မှာတော့ ဘောဒီဂတ် အဖြစ်သရုပ် ဆောင်ထား ပါတယ်။ ဒီမင်းသမီး ဟာ လူသစ်တန်း လက်ဝှေ့ ချန်ပီယံ ဆုရရှိ ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Lee Si-yeong in drama again, this timeabodyguard
မင်းသမီး Choi Yeo-jin ဟာ မော်ဒယ် အဖြစ် ခပ်ကြမ်းကြမ်း သရုပ်ဖေါ် တတ်ပြီး၊ အခမ်းအနား တွေမှာ ဝတ်စားတဲ့ အခါမှာလည်း၊ ပွင့်မထွက် ရုံတမယ် ဝတ်တတ် တဲ့အကျင့် ရှိပါတယ်။ အထက် ဖေါ်ပြပါ ပုံများကို ကြည့်ပါ။
Source : S. Korean Model Choi Yeo-Jin
Shocking kiss scene, Park Min-yeong,
'Lee Jang-woo kisses well'
မင်းသမီး Park Min-yeong နဲ့ မင်းသားသစ် Lee Jang-woo တို့ရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ kiss scene များကို Glory Jane (KBS) အမည် ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာတွေ့ကြ ရပါတယ်။
မင်းသား Lee Jang-woo ဟာ သရုပ်ဆောင် အတွေ့အကြုံ နုသေး ပေမဲ့ တော်တော် အနမ်း ကောင်းတဲ့ မင်းသားပါ လို့ မင်းသမီး Park Min-yeong ကပြောသွားပါတယ်။ (He doesn't have much experience but he'sagood kisser)
Source : Shocking kiss scene, Park Min-yeong, 'Lee Jang-woo kisses well'
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/512/hot-news-06-jan-2012
Graying Korean Actors And Actresses
Posted By - Ko Ko - November 22, 2011
Korean actors and actresses are getting old
ကျွန်တော့ကို update မလုပ်လို့ ဆိုပြီး ပရိသတ် ကဝိုင်း အော်နေကြ ပါတယ်။ ခရီးထွက် နေတာ ရယ်၊ ပြန်ရောက်တော့ နေမကောင်း ဖြစ်နေတာ ရယ်တို့ကြောင့် အခုလောက် ကြာသွား တာပါ။ အနူးအညွတ် တောင်းပန် ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လ လုံးလုံး ကိုးရီးယား အနုပညာ လောက သတင်း နည်းနည်း အေးနေ ပါတယ်။ (please see video.phpmyanmar/english as reference)
သတ်သေခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ကားတိုက်ခြင်း၊ ချစ်ကြိုက် ကြခြင်း၊ လက်ထပ်ခြင်း၊ အပျံစား ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ သီချင်း များ ပေါ်ထွက် ခြင်း၊ မင်းသား ဘိန်းစားခြင်း၊ စသည် စသည် တို့ မရှိပါ။ ရိုက်နေရင်း တန်းလန်း ထွက်ပြေးတဲ မင်းသမီး လည်း မရှိပါ။
Rain တစ်ယောက် စစ်ထဲ ဝင်ပြီး နည်းပြ ဆရာဖြစ် သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တစ်ခုပဲ နည်းနည်း ထူး ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ နာမည်ရ ကိုးရီးယား မင်းသား မင်းသမီးတွေ အိုစာ လာတဲ့ အကြောင်း နည်းနည်း ရေးလိုပါတယ်။
ကိုးရီးယား ထုတ်လုပ် သူတွေဟာ၊ ငွေရ သေချာတဲ့ မင်းသား မင်းသမီး အဟောင်းတွေ ကိုပဲ ထည်လဲ သုံးပြီး လုပ်စား နေကြ ပါတယ်။
မင်းသမီး မင်းသား တွေအိုလာတော့၊ တစ်ခုလတ် တလင်ကွာ၊ ခလေး တစ်ယောက် အမေ၊ အပျိူကြီး၊ မောင်လေးနဲ့ မမ၊ အမျိူးသား အမျိူးသမီး သမတ၊ ဖိုက်တင် စတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ရသလောက် ညှစ်ယူ နေကြ ပါတယ်။
အားလုံး အိုစာတဲ့ ပုံပေါက် နေတဲ့ ရာဇဝင် ကားတွေနဲ့ လည်း မင်းသမီး မင်းသား အိုအို တွေကို recycle လုပ်နေ ကြပါတယ်။
ငွေရတာကို မကြည့်ပဲ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ် လေးတွေကို မွေးဖို့တော့ လိုပြီး ထင်ပါတယ်။ နို့မဟုတ် ရင်တော့ ခါးလည် ပြတ်သွား နိုင်ပါတယ်။
Aging actors list
Aging actresses list
Actors 30 and under list
Actresses 30 and under list
Tags: korean actor | korean actress |
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/511/graying-korean-actors-and-actresses
Hot News-18 October 2011
Posted By - Ko Ko - October 18, 2011
Taecyeon(R) နဲ့ Kim Tae-hee(L)
မင်းသား Taecyeon နဲ့ မင်းသမီး Kim Tae-hee တို့ဟာ ဂျပန် Fuji TV မှရိုက်ကူး မဲ့ 99 Days with Me and My Star အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ October 23 မှာစတင် လွှင့်ထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Taecyeon To Appear with Kim Tae-hee in Japanese Drama
Kim Hyun-joong ရဲ့ ဂျပန် ၇မြို့
အဆိုတော် မင်းသား Kim Hyun-joong ရဲ့ ဂျပန် ခုနှစ်မြို့ show ပွဲများ အတွက် လက်မှတ်များ ရောင်းကုန် သွားပြီး လို့သိရ ပါတယ်။ ပရိသတ် မှတောင်းဆို ကြလို့ အခြားမြို့ များမှာ ထပ်တိုး show ပွဲများ ကျင်းပ ပေးဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Kim Hyun-joong's Concert Tour in Japan Sells Out
Kim Rae-won involved in assault rumor,
get-together inahostess bar?
ဂမင်းသား Kim Rae-won လူရိုက်မှုဖြစ်သလား?
မကြာမှီ က စစ်မှုထမ်း သက်ပြည့် သွားလို့ တပ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ မင်းသား Kim Rae-won ဟာ စားသောက်ခန်း တစ်ခုမှာ လက်ရောက် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက် လာပါတယ်။
မင်းသားရဲ့ agency ကတော့ စားသောက်ခန်း က ဧည့်ခံသူ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ရန်ဖြစ် တာကို မင်းသားက ဝင်ပြီး ဖြန်ဖြေ ပေးခဲ့ခြင်း သာ ဖြစ်တယ် လို့ပြောကြား သွားပါတယ်။
Source : Kim Rae-won involved in assault rumor, get-together inahostess bar?
Jang Dong-gun: 'I Am Glad to Work with
Zhang Ziyi and Cecilia Cheung'
Jang Dong-gun နဲ့တရုတ်မင်းသမီးနှစ်ဦးဇာတ်လမ်း
မင်းသား Jang Dong-gun ဟာ နာမည်ကျော် တရုတ် မင်းသမီး များဖြစ် ကြတဲ့ Zhang Ziyi နဲ့ Cecilia Cheung တို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီး Dangerous Liaisons (တရုတ်နာမည် Weixian Guanxi) အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကား ရိုက်တော့ မှာဖြစ် ပါတယ်။
ကိုးရီးယား ဒါရိုက်တာ Heo Jin-ho မှဦးစီး ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်ပြီ၊ 100 million yuan (18.5 billion Korean won နှင့်ညီမျှ ပါသည်) အထိ အကုန်အကျ ခံမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun: 'I Am Glad to Work with Zhang Ziyi and Cecilia Cheung'
"Dae Jang Geum" child Lee Se-yeong
is nowagrown woman
Drama Dae Jang Geum kid actress Lee Se-yeong (19)
ချန်ဂင် (ငယ်) လေးအရွယ်ရောက်လာပြီ
နာမည်ကျော် Dae Jang Geum (နန်းတွင်းရတနာ) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ချန်ဂင် ခလေး ဘဝ အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးလေး Lee Se-yeong ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိလာပြီး၊ လှလည်း အတော် လှလာပါတယ်
[အမှား ပြင်ဆင်ချက် -ချန်ဂင် ငယ်ဘဝ မဟုတ်ပါ - Choi Geum Young ငယ်ဘဝ ဟုပြင်ဆင် ဖတ်ရှု ပါရန်]
Lee Se-yeong (19)
မကြာမှီက "Boyfriend" အဆိုအဖွဲ့ ရဲ့ music vedio မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် သွားတာ တွေ့ရှိ ရပါတယ်။
Source : "Dae Jang Geum" child Lee Se-yeong is nowagrown woman
Kim Seon-ah sends Hyeon Binavideo message
Sam-sik မင်းငါ့ကို dinner တစ်ပွဲ ကြွးတင်နေတယ်နော်
မင်းသမီး Kim Seon-ah ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက်နေ့က SBS ရုပ်သံရဲ့ TV News At Night အစီအစဉ် မှာပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီးဟာ လောလောဆယ် စစ်မှုထမ်း နေတဲ့ မင်းသား Hyeon Bin ကို TV အစီအစဉ် ထဲကနေ လှမ်းနုတ်ဆက် ခဲ့ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း၊ မင်းဒီ အစီအစဉ် ကိုကြည့်နေလား။ ငါနောက်ဆုံး ရိုက် ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲကိုကော ကြည့်ပြီးပြီလား။ Sam-sik မင်းငါ့ကို dinner တစ်ပွဲ ကြွးတင်နေတယ်နော်၊ ငါ့ကို dinner မကျွေးပဲ မင်း စစ်ထဲ ဝင်သွား ခဲ့တာ။ စသည်ဖြင့်၊ လှမ်းပြော ခဲ့ပါတယ်။
Kim Seon-ah နဲ့ Hyeon Bin တို့ဟာ My Name is Kim Sam-soon (MBC 2005) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ စတင်ပြီး နာမည်ကျော်ခဲ့ သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲမှာ Hyeon Bin ရဲ့ နာမည် ပြောင် က Sam-sik ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Kim Seon-ah sends Hyeon Binavideo message
Hero and Choi Kang-hee's stong back hug
မင်းသား Hero ဟာ Twitter ထဲမှာ "Miss Kang ကို ပေါက်ထွက် သွားအောင် ဖက်ထားပုံ" ဆိုပြီး၊ မင်းသမီး Choi Kang-hee ကို နောက်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖက်ထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံ post လုပ်ထား ပါတယ်။
မင်းသားရဲ ပရိသတ် က တော်တော် မနာလို ဖြစ်ပြီး internet ထဲမှာ အတော် ပွက်လော ရိုက်သွားတယ်လို့ လည်း သိရ ပါတယ်။ Hero နဲ့ Choi Kang-hee တို့ဟာ Protect the Boss (SBS-2011 - ဟုတ်ကဲ့ဘော့စ်) ဇာတ်လမ်တွဲ မှာ ပါဝင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Source : Hero and Choi Kang-hee's stong back hug
Park Si-yeon to tie knot in November
လက်ထပ်တော့မဲ့မင်းသမီး Park Si-yeon
မင်းသမီး Park Si-yeon (32) ဟာလာမည့် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာ Hyatt Hote l(Seoul) တွင် လက်ထပ်တော့ မှာဖြစ် ပါတယ်။ သတိုးသား မှာ မင်းသမီးထက် ၄နှစ် ကြီးတဲ့ ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦးလို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Park Si-yeon to tie knot in November
Rain Join Army on October 11
အဆိုတော် မင်းသား Rain (နာမည်ရင်း Jeong Ji-hoon, 29) ဟာ ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာ လ ၁၁ ရက်နေ့က တိုင်းပြည် တာဝန် ၂ နှစ် ထမ်းဆောင်ရန် စစ်ထဲ ဝင်သွား ပြီဖြစ် ပါတယ်။
စစ်ထဲ မဝင်ခင် နိုင်ငံ အနှံ့ concert ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ပြုလုပ် သွား ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့က Apgujeong CGV ရှေ့၊ လမ်းပေါ်မှာ free street concert ကျင်းပ သွားခဲ့ ပါတယ်။
Source : Rain Join Army on October 11
Jang Geun-seok's Japan Tour Sold Out In5Minutes
ဂျပန်မှာ ၅ မိနစ်နဲ့လက်မှတ်
အဆိုတော် မင်းသား Jang Geun-seok ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံ မြို့ကြီး ၃ မြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၂၀ မှ ၂၆ ရက်အတွင်း show ပွဲ ၅ ပွဲ ကျင်ပရန် စီစဉ် ထားပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က လက်မှတ်များ စတင် ရောင်ချ ခဲ့ရာ ၅ မိနစ် အတွင်းပွဲ အားလုံးပြည့် လက်မှတ် ၆၀၀၀၀ အကုန် ရောင်းချ လိုက်ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Jang Geun-seok's Japan Tour Sold Out In5Minutes
Nam Sang-mi returns with
MBC "Lights and Shadows"
မင်းသမီး Nam Sang-mi ရဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသမီး Nam Sang-mi ဟာ Lights and Shadows (MBC 2011) အမည်ရှိ တီဗွီ ဇာတ်လမ်တွဲ အသစ်မှာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားများ ကတော့ Ahn Jae-wook နဲ့ Kim Min-jong တို့ဖြစ် ပါတယ်။ ၄င်း ဇာက်လမ်းတွဲ ကို နိုဝင်ဘာ လမှာ စတင် လွှင့်ထုတ် မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Nam Sang-mi returns with MBC "Lights and Shadows"
Yoo Jin and Ki Tae-yeong reveal
the final honeymoon spot
Yoo Jin နဲ့ Ki Tae-yeong တို့ရဲ့
မင်းသမီး Yoo Jin နဲ့ မင်းသား Ki Tae-yeong တို့ရဲ့ ပျားရည်ဆမ်း ခရီးဓါတ်ပုံ များကို wedding fashion magazine တစ်ခုမှာ ဖေါ်ပြ ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
၃ ပတ်ကြာ ပျားရည်ဆမ်း ခရီးစဉ်ကို Czech Republic မှာစတင် ခဲ့ပြီ Paris မှာအဆုံး သတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ၄င်းတို့ နှစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က MBC ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ Creating Destiny မှာအတူ ပါဝင် ခဲ့ကြ စဉ်က ချစ်ကြိုက် ခဲ့ကြပြီး မကြာခင်က လက်ထပ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Source : Yoo Jin and Ki Tae-yeong reveal the final honeymoon spot
Rain, "I will announce when
I sign with Richard Gere"
Rain စစ်ထဲကထွက်လာတဲ့အထိ Richard Gere
မကြာမှီ က ဟောလီးဝုဒ် မင်းသားကြီး Richard Gere ဟာ ကိုးရီးယား ကို အလယ်အပတ် ရောက်လာ ပါတယ်။ တိုစဉ်က မင်းသားကြီးဟာ Rain ကို သူ့ဘက်က စတင်ပြီး ဆက်သွယ် ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မင်းသားကြီးဟာ သူနဲ့ အတူ ရုပ်ရှင် ကားတစ်ကား ရိုက်ဖို့ Rain ကို ကမ်းလှမ်း တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ Rain က မကြာမှီ စစ်မှုထမ်း ရတော့မှာ ဖြစ်လို့ ငြင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ Richard Gere က Rain စစ်ထဲက ပြန်ထွက်လာ တဲ့အထိ သူစောင့်ပြီး ရိုက်နိုင် ပါတယ်လို့ ပြန်ပြော ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ကို Rain ဟာ Twitter ထဲထည့်ရေး ခဲ့ပြီး၊ သူနဲ့ Richard Gere တွေ့ဆုံ စဉ်က အတူ တွဲရိုက် ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ကိုပါ upload လုပ်ပြီး ဖေါ်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
Source : Rain, "I will announce when I sign with Richard Gere"
With new film, actress takes the
'Quick' route to cinema success
မင်းသမီး Kang Ye-won (31) ခေါင်းဆောင်တဲ့ Quick အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ဟာ အချိန်တို လေး အတွင်းမှာ လက်မှတ် 2.5 million ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး အလွန် အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ ယခင် ရုပ်ရှင် များဖြစ် ကြတဲ့ Haeundae (2009) နဲ့ Hello Ghost (2010) ဟာလည်း အလွန် အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : With new film, actress takes the 'Quick' route to cinema success
မင်းသမီး Ha Ji-won ခေါင်းတောင် တဲ့ Sector7အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဟာ ၃ရက် အတွင်းမှာ လက်မှတ် စောင်ရေ တစ်သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ ရပါတယ်။
သူ့ထက် မြင့်တဲ့ စံချိန် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကတော့ ၂ရက် အတွင်း လက်မှတ် တစ်သန်း ရောင်းချ ခဲ့ရတဲ့ The Host (2006) ပဲရှိခဲ့ ပါတယ်။
Source : "Sector 7" drives through 1,000,000 in3days
Marine Hyeon Bin Says 'I Want to Reach My Limit'
စစ်သား Hyeon Bin စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်း
ကိုးရီးယား မရင်းတပ်ဖွဲ့ (Marine Corps) တွင်စစ်မှု ထမ်းနေသော မင်းသား Hyeon Bin (နာမည်ရင်း Kim Tae Pyung) သည် ၄င်းနှင့် အတူ ရဲဘော် ရဲဖက် များ ၆ပတ်ကြာ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည့် သင်တန်း အကြောင်းကို I Am Marine အမည်ဖြင့် စာအုပ် တစ်အုပ် ကို ထုတ်ဝေ လိုက် ကြောင်း သိရ ပါသည်။
Source : Marine Hyeon Bin Says 'I Want to Reach My Limit'
Lee Byeong-heon with Bruce Willis
မင်းသား Lee Byeong-heon နဲ့ Bruce Willis
ဟောလီဝုဒ် မှ ထုတ်လုပ် သူများသည် G.I.Joe2ရိုက်ကူးရန်၊ Lee Byeong-Heon နှင့် ညှိနှိုင်း နေပါသည်။ အလားတူ ထုတ်လုပ် သူများမှ ကမ္ဘာကျော် မင်းသား Bruce Willis နှင့်လည်း ဆွေးနွေး နေပါသည်။
ကံကောင်းလျင်၊ Lee Byeong-Heon သည် Bruce Willis နှင့်တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ခွင့်ရရှိ မည်ဖြစ် ပါသည်။
Source : Lee Byeong-heon with Bruce Willis?
Hundreds of Japanese Protest
Against Korean Wave
ကိုးရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ များ အဆက်မပြတ် ပြသနေခြင်း ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြမှု တစ်ခုး ဂျပန်တွင် ပြုလုပ် ခဲ့ကြ ပါသည်။
Fuji TV Headquarter ရှေ့တွင် လူ ၅၀၀ ခန့်စုရုံး ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပြီး၊ အများစုမှာ လက်ယာ အစွန်းရောက် များဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန် စစ်မရှုံးမှီ ကအသုံး ပြုခဲ့သော Imperial Japanese Flag များကိုင် ဆောင်လာကြ ပါသည်။
Source : Hundreds of Japanese Protest Against Korean Wave
Mother of twins Lee Young-ae
ravishes perfect body and
clear skin6months after birth
မိခင် Lee Young-ae
မင်းသမီး Lee Young-ae (နန်းတွင်းရတနာ - ချန်ဂင်) သည် လွန်ခဲ့သော ၆လ ခန့်က အမွှာ ခလေး ၂ဦး မွေးဖွား ခဲ့ပါသည်။
Hu Natural Essence အတွက် ကြော်ငြာ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး မှုကို မကြာမှီက ပြုလုပ် ခဲ့ရာ အလွန်မှ လှပ ချောမေားဆဲ ဖြစ်သည် ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။
Source : Mother of twins Lee Young-ae ravishes perfect body and clear skin
၂၀၁၁ ကိုးရီးယားမယ် Lee Sung-hye
Miss Korea 2011 ရွေးပွဲကို မကြာမှီက ကျင်းပ ခဲ့ရာ Miss Seoul Lee Sung-hye (၂၂နှစ်) အား ၂၀၁၁ ကိုရီးယား မယ်အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ကြောင် သတင်း ရရှိ ပါသည်။
Source : Miss Korea 2011
Rain isacombat pilot "Look
forward toanew transformation"
ကိုးရီးယား တိုက်လေယာဉ် မှူးများ၏ အချစ်နှင့် ဘဝ သရုပ်ဖေါ် Flight: Closer to the Sun အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ကားကို Rain ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ပြီး မကြာမှီက ရိုက်ကူး ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
Source : Rain isacombat pilot "Look forward toanew transformation"
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/510/hot-news-18-october-2011
Posted By - Ko Ko - September 3, 2011
မင်းသား Lee Min-ho (24) နဲ့ မင်းသမီး Park Min-young (25) တို့တွဲ နေပြီး ဆိုတာကို မင်းသမီး နဲ့ မင်းသား တို့ရဲ့ အေဂျင့် များမှ တရားဝင် အတည်ပြု လိုက်ကြ ပါတယ်။
၄င်းတို့ နှစ်ဦး ဟာ မကြာခင် ကပြပြီး သွားတဲ့ City Hunter (SBS 2011) "မြို့ပြမုဆိုး" ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ အလွန်မှ လိုက်ဖက် ညီပြီး လူကြိုက် များခဲ့ ပါတယ်။
Korean drama 'City Hunter'
အေဂျင့် များရဲ့ အဆိုအရ ၄င်းတို့ နှစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်ထဲက စတင်တွဲခဲ့ ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး တို့ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် က I Am Sam (SBS 2007) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ စတင်ပြီး တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
မင်းသား Lee Min Ho ဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မှာ Nonstop5(MBC 2004) ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ drama လောက တွင် ခြေချခဲ့ သေါ်လည်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ၊ မြန်မာများ F4 ဇာတ်လမ်းတွဲ လို့ သိထား ကြတဲ့ Boys Before Flowers (KBS2, 2009) ကျမှ လူသိများ ကျော်ကြား လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာများ က မင်းသား Lee Min Ho ကို "F4 မင်းသား" လို့ပဲ ခေါ်ကြ ပါတယ်။
Korean drama 'Boys Before Flowers'
Lee Min Ho in 'City Hunter'
မင်းသမီး Park Min Young ဟာလည်းပဲ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှာ Unstoppable High Kick (MBC, 2006) ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ drama လောက တွင် ခြေချခဲ့ ပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ပြသတဲ့၊ Sungkyunkwan Scandal (KBS2, 2010) "ဆောင်ကျန်ကွမ် အရှုတ်တော်ပုံ" ဇာတ်လမ်းတွဲ ကျမှ super မင်းသမီး ဖြစ်လာ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Korean drama 'Sungkyunkwan Scandal'
Park Min Young in 'Sungkyunkwan Scandal'
နာမည်ကြီး မင်းသမီး နဲ့ မင်းသား တွဲကြတာ ဆိုတော့၊ လူတွေ အထူးပဲ စိတ်ဝင်စား နေကြ ပါတယ်။
နောင်မှာ လက်ထပ် ကြတဲ့ အထိ မြဲအောင် တွဲသွား နိုင်ကြ ပါစေလို့ လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ဆုမွန် ကောင်း တောင်းပေး အပ်ပါတယ်။
‘City Hunter’ actors admit they are engaged inareal-life
Lee Min Ho dating "City Hunter" co-star Park Min Young
Profile of Lee Min-ho
Profile of Park Min Young
Drama "City Hunter"
Drama 'Boys Before Flowers'
Summary - Korean actor Lee Min Ho has finally gotten himselfagirlfriend, and the lucky girl is none other than Park Min Young, his co-star from the recently-concluded drama [City Hunter]. Their agencies confirmed Tuesday that the two have been dating for overamonth after shooting ended. Apparently, love had blossomed between the two on the set, but Lee and 25-year-old Park only started going out after shooting wrapped up in July. Prior to the announcement from their agencies, the couple were rumoured to be seeing each other, after pictures of their frequent meetings surfaced on the Internet. Lee and Park first met while filming 2007-s high-school drama [I Am Sam], where Park was the lead actress and Lee inaminor role with the supporting cast.Agencies reps have requested that the media and fans give the young couple more privacy as they are still in the getting-to-know-each-other-better stage.
28 comments submit comments
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/509/lee-min-ho-and-park-min-young-are-dating
Rendering time 0.0280 sec **
7ac0de92b720aa14cb2199c3dd2cddf4 - January 22, 2018 - 2:06:19 am